Hoggantoonni Olaanoo Oromiyaa ragaa ittisummaaf beellama biraa gaafatan – Kichuu
[ February 28, 2021 ] US naval ship docks in Sudan for ‘Red Sea security’ World
HomeAfaan OromooNewsHoggantoonni Olaanoo Oromiyaa ragaa ittisummaaf beellama biraa gaafatan
Hoggantoonni Olaanoo Oromiyaa ragaa ittisummaaf beellama biraa gaafatan
Manni Murtii Olaanaa Federaalaa dhaddachi yakkaa 4ffaa oolmaa isaa har’aa waaree boodaatiin, Obbo Baqqalaa Garbaa eegumsa amansiisaa waliin bakka yaalii fayyaa fooyyee qabu argachuu danda’an geeffamanii akka yaalaman murtii kennee jira.
Dhimma poolisiin qabamanii dhiyaachuu Ministira Muummee Haayilamaariyaam Dessaalenyi fi beellama biroo aanga’oonni mootummaa olaanoo naannoo Oromiyaa gaafatan irratti murtee kennuuf ammoo Mudde 27tti beellama qabatee jira.
Odeessa guutuuf Hoggantoonni Olaanoo Oromiyaa ragaa ittisummaaf beellama biraa gaafatan
Aanga’oonni mootummaa olaanoo ragaa ittisaa hoggantoota paartii kongirasii Federaaliistii Oromoo ta’anii mana murtiitti akka dhiyaatan waamaman guyyaa sadaffaaf osoo hin dhiyaatiin hafaniiru.
(BBC News Afaan Oromoo)–Hoggantoonni olaanoo kunneen mana murtiitti dhiyaachuu kan hin dandeenyeef, walgahii ariifachiisaa irra waan jiraniif ta’uu eeruun beellamni biraa akka qabamuuf xalayaa waajjirri DhDUO mana murtiif barreesseen gaafatanii jiru.
Gaaffii Ministirri muummee poolisiin qabamee akka dhiyaatu jedhu dabalatee dhimma hoggantoonni olaanoo Oromiyaa beellama biraa gaafachuu irratti waaree booda manni murtiin murteen kennama jedhamee eegama.
Gama biraan dhaddachi yakkaa afraffaa mana murtii olaanaa federaalaa oolmaa isaa har’aatiin, ragaalee ittisaa himatamaa 1ffaa Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi kan himatamaa 6ffaa Obbo Galaanaa Nagaraa dhaggeeffatee jira.
Dhaddachichi galmee kana jalatti himatama shororkeessummaa irratti dhiyaate ofirraa ittisuuf fedhii hin qabnu murteen nuuf haa kennamu kan jedhan himatamtoota 5 yakkamtoota jechuun murtee kennee jira. Adabbiifis Mudde 27’tti beellama qabatee jira.
Gama biraan fayyaan isaanii haala gaarii irra akka hin jirreefi yaala fooyyee qabu argachuuf gaafatanii dhorkamuu isaanii mana murtiitti kan iyyatan dhimma dura taa’aa itti aanaa Koongirasii Federaaliistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa, har’a waaree booda murtee itti kennuuf manni murtii beellama qabatee jira
[Photos] A year of protests: Togo, Zimbabwe, Ethiopia, Cameroon etc.
Oduu Keeniyaatii dhufe!